5 Innovative Ecommerce Ngwa Must Ga-anwale | ECommerce ozi ọma
Encarni Arcoya | | eCommerce, Ọzụzụ ECommerce, Ahịa azụmahịa
Ọzọ anyị chọrọ ịkọrọ gị ndepụta nke 5 ohuru ecommerce ngwa na ha nwere ike iji zụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nkwekọrịta. Ọtụtụ n'ime ngwa ndị a na-arụ ọrụ dị ka ahịa ma ọ bụ na-enyere ndị ọrụ aka ịchọpụta ngwaahịa ọhụrụ.
I nwekwara ike ịchọta ụfọdụ Ngwa ahia e-commerce na-agbanwe agbanwe nke na-akọwapụta ụzọ esi azụta ngwa ahịa na ọrụ.
1 1. Oge opupu ihe ubi
2 2. Hchụ nta Productchụ nta
4 4. Bulie
5 5. Hchụ nta
1. Oge opupu ihe ubi
Ọ bụ ngwa na-enye gị ohere ịnweta a foto foto instagram nke ngwaahịa niile ị nwere ike ịzụta. Gụnyere ndị nrụpụta kachasị elu na ụdị okomoko, gbakwunyere na-enye gị ohere ịchọgharị mkpokọta sitere na ndị na-ebipụta akwụkwọ.
N'iburu n'uche na Instagram bụ netwọkụ mmekọrịta nke ọtụtụ mmadụ na-eji, yana na ọ na-ewepụ ndị ọzọ, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na anyị chere banyere ya iji kwalite ya na ihu ahịa eCommerce. N’ezie, ọ bụghị isiokwu niile na-aga nke ọma na ịntanetị, yabụ ị ga-ekpebi nke kachasị mma.
2. Hchụ nta Productchụ nta
Ọ bụ Ngwa Ecommerce nke ahụ na-enye ohere ịchọpụta na ịkekọrịta ngwaahịa ndị na-ewu ewu, ọkachasị ndị nọ na teknụzụ. Ndị ọrụ nwere ike ịtụ vootu maka akara ngwaahịa, mee ọchụchọ, yana soro nkata na ndị na-eso ngwaahịa.
N'agbanyeghị nke dị n'elu, ị kwesịrị iburu n'uche na ngwa a na-elekwasị anya na teknụzụ. Nke ahụ bụ, ihe ị ga-ahụ ebe a bụ ngwaahịa metụtara geeks, ngwaọrụ, na ndị ọzọ, mana ọ bụghị ụdị ngwaahịa ọ bụla. Agbanyeghị, ị ga - achọta egwuregwu, akwụkwọ, ngwa, pọdkastị, wdg. na nke ah u yiri isiokwu ah u.
Ọ na-arụ ọrụ dị nnọọ mfe kemgbe, ozugbo ị wụnye ya, ị ga-achọ naanị ngwaahịa ịchọrọ, na-enwe ike ijide ha ma ọ bụ isoro ndị enyi ndị ọzọ kerịta ha. Tụkwasị na nke a, ịnwere ike ịtọ ndepụta ndị enyi yana, soro ha, nwee ike ịhụ ihe ha na-eme, ngwaahịa ha na-echekwa ma ọ bụ na-amasị, wdg N’ụzọ dị otu a, ọ bụrụ na ị ga-enye ha onyinye, ị ga-enwe ike ime ya oge niile niihi na ị ga-enwe ike ịhụ ihe ụtọ ha ka ọ ghara ịda n’oge ọbụla.
Amabeghị ya nke ọma, mana eziokwu bụ na, ọ bụrụ na eCommerce gị na teknụzụ, ọ nwere ike ịbụ ezigbo ebe itinye ego n'ihi na ị ga - enweta ndị na - ege ntị nwere mmasị na ya, yabụ ọ bụrụ na ị na - enye ngwaahịa gị nwere ike ibute ohere nke ahịa na-eme. N'ezie, ị ga-elebara anya ma nkọwa nke ngwaahịa na ihe oyiyi. Karịsịa nke ikpeazụ ebe ọ bụ na ha bụ ndị ga-ahụ ụzọ ọhụụ (ma ọ bụrụhaala na ha apụghị na onyonyo ha agaghị enwe ike ịgụ ederede ahụ ị debere na nke ọ bụla iji mee ka ha gaa ịzụta ya).
Nke a Ngwa Ecommerce a kọwara dị ka "shoppinglọ ahịa ịzụ ahịa na ekwentị", si otú a na-enye onye ọrụ nri nke ngwaahịa ndị jikọtara, ndị ọrụ niile na-eziga ha. Can nwere ike ịgbaso ụlọ ahịa na ndị ọkacha mmasị n'otu ebe, yana ị nweta ozi gbasara ngwaahịa ahaziri maka onye ọrụ ahụ.
N'ezie, Wanelo dabere na ngwa iji chekwaa ihe mmadụ nwere ike ịmasị, n'ụzọ nke na, mgbe ịchọrọ ịnye ha onyinye, naanị ị ga-ahụ ihe masịrị ha iji nweta echiche nke ihe ha chọrọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ ụzọ isi soro ndị mmadụ na-ekwurịta okwu site n'inye ha ihe atụ nke ngwaahịa metụtara ihe ha na-achọ.
Na mgbakwunye, ọ dịghị mkpa na ha hapụrụ ngwa ahụ iji nwee ike ịzụta, ha nwere ike ịme ya n'ime ya site na kaadị akwụmụgwọ.
N'anya, Wanelo ga-echetara gị ọtụtụ Pinterest, ebe ọ bụ na ihe kachasị mma nke ngwa ahụ bụ onyonyo, mana ịnwe ike ịzụta na-enweghị ịhapụ ga-enyere aka mee ka ịzụta ahụ yikarịrị. Ya mere, maka eCommerce, ịnọ ebe ahụ nwere ike imeghe ụzọ ọzọ iji nweta ego na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ọkachasị n'ihi na ọ bụrụ na ị na-ere ezigbo ahịa, ha nwere ike ịchọ ịmeghachi ahụmịhe ahụ ma emechaa.
N'ezie, ị ga-eburu n'uche na ndị na-ege ntị maka ngwa a bụ maka ndị na-eto eto, ọkachasị ụmụ nwanyị, ndị nọ n'agbata afọ 15 na 30. Nke a apụtaghị na ndị agadi enweghị, mana enwere obere ọdịnaya yana ahịa pere mpe nke ndị ahụ nwere ike ọ gaghị eche na amata ha.
Also nwekwara nsogbu, nke ahụ bụ na o nwere ihe karịrị ọkara nde ụlọ ahịa na-enye ngwaahịa ya. Nke ahụ pụtara na asọmpi ahụ siri ike, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị sọ mpi na ụlọ ahịa si n'akụkụ ụwa niile. Ya mere, ebe a ihe oyiyi dị elu nke jikọtara ndị mmadụ bụ kaadị azụmahịa gị kacha mma.
Ọ bụ Ecommerce ngwa ịzụta na ire kaadị onyinyeYa mere, ndị ọrụ wụnye ya na ekwentị ha nwere ike ịnweta ịchọta kaadị onyinye dị ala site na ụdị dị ka Target, Home Depot, na Macy.
Ọ na-arụ ọrụ dị mfe n ’ebe ị nwere ike ijikọ karịa 1000 ụdị dị iche iche, ụfọdụ n’ime ha maara nke ọma. Gịnịkwa ka ị ga-eme? Ihe mbu bu ichoputa otutu ego ndi edeputara na ngwa. A na-enye ego ndị a site na kaadị onyinye maka onye ọ bụla iji.
Na mgbakwunye, ọ bụghị naanị na ị ga-enwe ike ịchọta kaadị ejiji, enwekwara ụlọ ahịa, ụlọ nri, ebe a na-ere mma, ụdị ịchọ mma na ọtụtụ ndị ọzọ. Ozugbo ị jidere ha, ị nwere ike iji ha na ụlọ ahịa, ị ga-enwekwa ọtụtụ ịchọrọ.
Nke kachasị mma bụ na na-emetụta na ọtụtụ ebe, nke-enye gị ohere ka ukwuu iji ndị a (yana nke ahụ, ị ​​ga - erute ndị ọrụ ndị ọzọ).
N'ezie, nke a n'ogo ojiji. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ka ha tinye eCommerce gị, ị ga-akpọtụrụ ha ka ị hụ ọnọdụ ndị ị ga-emerịrị ka ụlọ ahịa gị n'ịntanetị wee rite uru.
Ikwesiri iburu n'uche na ọ bụ ngwa zuru ụwa ọnụ, nke ahụ pụtara na, ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma ịnabata gị, ị ga-apụ n'akụkụ ụwa niile na ọtụtụ nwere ike ịchọrọ ịzụta n'aka gị. Gịnị mere anyị ji gwa gị nke a? Ọ dị mma, n'ihi na ọ ga-adịrị ụlọ ahịa gị n'ịntanetị mfe ịpụta n'asụsụ ndị ọzọ, na mgbakwunye na Spanish, dị ka Bekee, yana ị melite ụgwọ mbupu na mpụga Spain (ọ bụrụ na ịnweghị ha) iji mee ka ihe a niile doo anya tupu ị kwụsị inwe echiche ọjọọ.
5. Hchụ nta
Ọ bụ ngwa e-commerce nke dị na nke a na-enye ndị ọrụ ohere ibugo foto nke ngwaahịa ha na-achọ. Ndị na-azụ ahịa na-enyere gị aka ịchọta ma zụta ngwaahịa ahụ na ọnụ ala dị ọnụ ala. Ndị ọrụ nwere ike ịlele usoro ngwaahịa ma ọ bụ jiri nka ha kwado ngwaahịa ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na tupu anyị ekwupụta ngwa na-elekwasị anya na teknụzụ teknụzụ, oge a ka anyị ga-agwa gị gbasara HUNT, ngwa nke lekwasịrị anya na ụwa nke ejiji.
Ma, dị ka anyị gwaworo gị, ọ dabere na "ịchọ na njide" nke ihe ejiji, ọ bụrụ uwe ma ọ bụ ngwa. Iji mee nke a, ihe ọ na-eme bụ inwe nnukwu ndepụta nke ngwaahịa na saịtị Internetntanetị nke a na-ewere dị ka nnukwu aka nke ejiji iji nwee ike depụta ngwaahịa ndị dị otu ma ọ bụ ndị yiri nke ị na-achọ.
Ngwa a dị maka ma gam akporo na iOS Ọ dabere na obodo n'ụzọ ọ bụla na mgbe ị na-ebugo foto n'ihi na ị masịrị ya, obodo niile na-enyere gị aka ịchọta uwe ahụ ma ọ bụ ngwa ahụ. Na mgbakwunye, enwere mmekọrịta na usoro nke ajụjụ na azịza gbasara ejiji, ụdị uwe, enyemaka na nha, wdg.
Nke a emeela ka ọ bawanye karịa n'ihi na ọ na-enyere ndị nwere ụdị ihe omume ntụrụndụ ahụ aka ịkọrọ ma nweta ọrụ nyocha ihe oyiyi, ndụmọdụ gbasara uwe, onye na-azụ ahịa onwe ya, wdg. mfe.
Banyere imepụta ya, ọ dabere, dịka na ngwa ndị ọzọ, n'ụdị yiri Pinterest, ebe ha na-egosi gị ọtụtụ onyonyo na ohere ịzụrụ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọzụzụ ECommerce » 5 Ngwaahịa Ecommerce ohuru ohuru I Kwesiri
Kedu mmetụta ọha mmadụ natara site na azụmahịa E-commerce?